Dhacdooyinka siyaasada ee buuqa iyo sawaxanka ka dhaliyey jawiga todobaadyadan Soomaliland, siiba xubnaha cusub ee Komishanka doorashooyinka Qaranka Somaliland waxay noqotay mid mugdi iyo jah-wareer ku riday shacbiga, islamarkaana mindi mindi ka dhigtay madaxdii dalkan masiirkeeda loo aanaynayey. Labada dhinac ( Madaxweyne Biixi iyo Gudoomiyaha Wadani) waxay is dhaafsadeen hadalo xanaf leh oo dhinacyadu isu adeegsadeen warbaahinta iyo sharciyada dalka( Xeerarka doorashada iyo dastuurka), iyada oo midba ka kale ku duraya sharci jebin. Bal aan is dul-taagno dooda labada dhinac; Gudoomiyaha Wadani ” Xeerka kaliya ee aan leenahay waa Xeer Lr. 20 waxa uu soo baxay 2001, waxaana saxiixay
Madaxweyne Cigaal, Cabdiraxmaan Ciro ma saxiixin.
Taasina waxay ku tusinaysaa in aan xeerarka dalka iyo dastuurka Madaxweynuhu xogogaal u ahayan, waxayna ahayd inuu xogogaal u noqdo maadaama uu dalka ku xukumayo, waana sababta ugu weyn ee aan filayo in uu madaxweynuhu xeerarka ugu tumanayo ee indhaha uga ridayo. Heshiiskii July 2019 ee asxaabta nuxurkiisu waxa uu ahaa in la soo magacaabo komishan cusub oo bedalo komishankii hore, balse waxa layaab leh inuu soo magacaabay xubin ka mida komishankii hore ee la duray.” Madaxweynaha ” maalmahan waxaad maqlayseen Buuq badan oo ka soo yeedhaya xisbiyada Mucaaridka , gaara ahaan wadani ee leh sharcigii ayaa la jebiyey, heshiiskii xisbiyada ayaa laga baxay, Baarlamaanka yeeli mayno go’aankiisa. Laba qodob ayeyna ka hadlayeen; waxay leeyihiin madaxweynuhu heshiiskii xisbiyada ayuu jebiyey oo xubno ka mida komishankii hore oo heshiisku diidayo ayuu soo celiyey.
Anigu ma saxiixan heshiis qodobkaasi ku jiray, haday hayaan umada haw soo bandhigaàn. Waxa uu dhigayey heshiiskaasi in la soo doorto 7 xubnood oo komishana. Sababta loogu dari waayey qodobkaasina waa sharci aanaan dhaafi karin hadaanu xisbiyada nahay ayaa yaal. Xeerka Komishanka qodobkiisa 12aad, faqrada 4aad waxay leedahay mudada komishanku waa 5 sano, waana loo cusboonaysiin karaa. Waxaana saxiixay Gudoomiyaha Wadani oo xiligaa ahaa Gudoomiyaha Baarlamaanka. Qodobka 2aad, waxay leeyihiin xubnaha madaxweynaha waxa ku jira kuwa aanan ogolayn. Taasi waxay leedahay sharci lagu qiyaaso, waxaana iiga danbeeya baarlamaanka. 7 xubnoodna, 2 xisbiyada keenay, 2 guurtida, 3 anaa ku daray sida sharcigu dhigayo.
Qolana kuwooda kuma farogelin, maxaa lagu haystaa kuwayga?” Hadaba isweydiintu waxay yahay labada dhinac keebaa ilduufay? Miyaase lays dhaar-dusmeeyey Mise nuqulo kala duwan oo ku saabsan labadan qoraal ee kor ku xusan ayay kala haystaan labada dhinac? Mise waana kala gar-qaadnayn? Jawaabaha su’aalahan waxay u baahan yihiin inay shacbigu kala saari karaan, iyaga oo adeegsaanaya nuqulada xeer Lr. 20/2001 iyo heshiiska xisbiyada ee doorashooyinka. Hadii aynu tooshka ku qabano, marka laga hadlayo hanaanka xulista xubnaha cusub ee doorashooyinka heshiiska xisbiyada waxa uu dhigayaa ” Qodobka 6aad: Hanaanka soo xulista xubnaha Gudida Doorashooyinka Qaranka waxa loo raacayaa kala horaynta ku xusan xeerka Doorashooyinka Golaha Deegaanka iyo Madaxtooyada (Xeer Lr. 20/2002) ee wax ka bedalka lagu sameeyey 15/9/2012, Qodobka 11aad, Faqrada 2aad”. Bal aynu eegno Xeer Lr. 20 qodobada 11aad iyo 12aad iyo weliba 13aad, maxay ka hadlayaan: Qodobka 11aad Qaab-dhismeedka KomishankaDoorashooyinka Qaab-dhismeedka xafiisyada Komishanka Doorashooyinku wuxuu ahaanayaa sidan: 1. Xarunta Dhexe ee doorashooyinka. 2. Xafiiska Gobolka ee doorashada. 3. Xafiiska Degmada ee doorashada. 4. Xafiiska goobta cod-bixinta doorashada. Qodobka 12aad Xubnaha Komishanka Doorashooyinka 1. Komishanku wuxuu ka koobnanayaa 7 xubnood, oo kala ah: a) Guddoomiye iyo 6 xubnood. b) Guddoomiyaha & Guddoomiye-xigeenka Komishanka ayaa iska dhexdooranaya. c) Mudada xilka ee Komishanku waa 5 sano, oo ka bilaabmaysa marka Golaha Wakiiladu ansixiyo, waana loo cusboonaysiin karaa xilka. d) Shaqaale dawladeed, xubin Barlamaan, Xubnaha Golaha Wasiirada, ciidanQaran iyo xubin xil u haysa urur/xisbi kama mid noqon karo Komishanka. 2. Komishanka doorashooyinka waxa magacaabaya Madaxweynaha JSL ka dib marka uu helo soo jeedimaha :- a) 2 xubnood oo Golaha Guurtidu soo xulo. b) 2 xubnood oo ay soo xulayaan ururada/xisbiyada mucaaridka ah ee diiwaangashan. c) 3 xubnood ee kale Madaxweynaha ayaa soo xulaya. 3. Komishanka waxa cod kala badh iyo hal ah (absolute majority) ku ansixinaya Golaha Wakiilada, markuu guddi- hoosaadka Arrimaha Guduhu soo hubiyo in ay buuxinayaan shuruudaha Xeerku tilmaamayo. 4. Xafiiska dhexe ee Komishanka Doorashooyinku wuxuu xaruntiisa ku yeelanayaa caasimadda Hargeysa. 5. Komishanka xil-gudashadiisa wuxuu ku salaynayaa Dastuurka JSL, Xeerkan, iyo xeerarka kale ee khuseeya, shirarkoodu wuxuu ku qabsoomayaa Kooram, go’aanadoodu waxay ku ansaxayaan aqlabiyad. 6. Komishanku waxa uu yeelan doonaa Xeer-hoosaad u gaar ah, o